Hanti dhowrka qaranka oo shaaciyay in malaayiin doollar ay ku maqan tahay xukuumadii Cumar C/rashiid – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hanti dhowrka qaranka oo shaaciyay in malaayiin doollar ay ku maqan tahay xukuumadii Cumar C/rashiid
Nuur Faarax Jimcaale oo ah hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa markii ugu horeeysay shaaciyay in ka badan 100 milyan oo doollarka Mareykanka ah ay ka maqan tahay miisaaniyadda xukuumadii hore ee uu ra’iisul wasaaraha ka ahaa Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Hanti dhowrka oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkii 2015-ka oo aan weli la xirin ay ka maqan tahay lacag dhan 14 milyan oo doollar, sidoo kalena miisaaniyadda sanadkii 2016-ka ay iyadane ka maqan tahay lacag gaareysa 96 milyan oo doollar.
Lacagtaan tirada badan ayuu hanti dhowrka ku sheegay in loo heysto wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti iyo ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte oo wakiil ka ah ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Labadaasi mas’uul ayuu ku eedeeyay inay iska dhaga tireen qoraalo iyo codsiyo badan uu hore u gaarsiiyay, wuxuuna tilmaamay in qoraaladaasi ay ahaayeen in la saxo miisaaniyadda iyo lacagaha maqan, lana soo marsiiyo xafiiska hanti dhowrka qaranka.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan si deg-deg ah ku ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2017-ka, waxaana durbadiiba si weyn uga hor yimid hanti dhowrka qaranka oo sheegay inuu arrimahaan la wadaagi doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ugu dambeyntii, hanti dhowrka qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya inaysan ansixin miisaaniyadda ay soo gudbiyeen golaha wasiiradda ee xukuumadda waqtigeeda dhamaaday.